December 2017 – Kalfadhi
December 28, 2017 January 22, 2018 Kalfadhi
Erayga motion; waxaa aad loo isticmaalaa marka la joogo Fiisigiska (Physics). Macne ahaan waxa uu noqonayaa isbeddel ku dhaca shayga waqti kaddib, marka loo eego barbixinta, masaafada, xawaaraha, dardargelinta, iyo waqtiga. Marka aan joogno siyaasadda mooshin waa soojeedin lagu soo bandhigay dood ama go’aan laga gaaray mid ka mid ah golayaasha baarlamaan ee jira. Dhaqdhaqaaqiisu ama ujeedku waa in la soo jeediyo (guuritaan), arrin laga guuro oo meel kale loo guuro; isla markaana maslaxad loo arkay in loo guuro, ka hor inta doodda ama codeynta aan laga qaban gudaha baarlamaanka.…
Howlihii Baarlamaannada iyo dhacdooyinkii 2017 qaarkood
December 21, 2017 January 4, 2018 Kalfadhi
Sanadkan dhamaadka ah ee 2017 wuxuu Soomaalida u billowday iyadoo dalka ay ka dhaceen doorashooyin. Xildhibaannada Goloha Shacabka iyo Aqalka Sare oo qaarkood la doortay, kuwo kalena ay dhiman yihiin. Wuxuu ahaa sanad la kowsaday socoshada dhaqdhaqaaqyada iyo ololeyaasha murashaxiinta kuraasta baarlamaanka iyo madaxtooyada oo ka socday Muqdisho iyo xarumaha maamul-goboleedyada. Sidoo kale waxaa dalka soo maray dhacdooyin waaweyn oo isugu jira kuwo siyaasadda la xiriira, dagaallo dhacay, qaraxyo, mooshinno, madax is casishay iyo kuwo kuraasta ku dagaallamay intaba. Jannaayo Bishii ugu horreysay ee Janaayo, waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii…
December 19, 2017 Kalfadhi
Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo ka mid ah xildhibaannada Golaha Shacabka ee baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya, wuxuu 1960-kii ku dhashay degmada Buulo-burte ee gobolka Hiiraan. Dhamaadkii sanadkii 2016 ayaa laga soo doortay deegaannada maamulka Hir-Shabeelle. Shan sano ka hor ayay xildhibaanka, xaaskiisa iyo afar carruur ah oo uu dhalay dalka dib ugu soo laabteen. Waxay ka soo guureen dalka Kanada oo ay ku noolaayeen. Markaas waxaa loo magacaabay wasiir ka tirsan xukuumaddii raysul wasaare Cabduqaadir Faarax Shirdoon. Waxbarashada iyo takhasuska Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed waxa uu waxbarashadiisa aasaasiga ah ee hoose…
Falanqeyn Sharciyo La Ansixiyay Warar
Sharciga Kheyraadka Biyaha iyo faa’iidada uu yeelan karo
December 19, 2017 January 2, 2018 Kalfadhi
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 11-kii bishii November ansixiyay hindise-sharciyeedka kheyraadka biyaha oo ay diyaarisay Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha. Waa sharci ka kooban 9-cutub oo qeexaya kheyraadka biyaha dalka, lahaanshaha, xuquuqda, hay’adda ka shaqeynaysa, rukhsadda iyo sida looga faa’iideysanayo. “Waxa ay iila muuqataa in uu yahay sharci laga soo shaqeeyay, waxtar wanaagsanna u leh ka faa’iideysiga biyaha labada webi ee dalka mara,” ayuu Kalfadhi u sheegay Cabdifataax Macallin Nuur oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka. Wuxuu intaa ku daray inuu sharcigan billow fiican u yahay ka faa’ideysiga kheyraadka biyaha dalka iyo…
Golaha Shacabka oo lagu wado inuu degdeg uga soo noqdo fasaxa
December 18, 2017 December 18, 2017 Kalfadhi
Xildhibaan Axmed Macallin Fiqi oo ka mid ah mudaneyaasha Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa sheegay inuu rajeynayo maalmaha soo socda inuu dib u furmo kalfadhiga baarlamaanka si ay uga arrinsadaan dacwad uu Xeer-ilaaliyaha Qaranka ku soo oogay labo xildhibaan. Mudaneyaal kulan degdeg ah xalay ku yeeshay Muqdisho ayaa saxiixay warqad ay ku codsanayaan in laga soo noqdo fasaxa Golaha oo billowday labo maalmood ka hor. Kalfadhiga Golaha Shacabka ayaa dib u furmi kara haddii ay sidaas dalbadaan 55 xildhibaan. Xeer-hoosaadka baarlamaanka waxaa ku qoran in aan xildhibaan la xiri karin, lana…
Golaha Shacabka oo fasax galay
December 16, 2017 Kalfadhi
Kalfadhiga labaad ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Muqdisho. Waxaa xaadiray mudaneyaal gaaraya 173 xildhibaan. Waxaa shir guddoominayay Gudoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) oo ay weheliyeen labadiisa ku-xigeen Cabdiwali Muudey iyo Mahad Cawad. Mudaneyaasha Golaha Shacabka ayaa galay fasax 2 bil ah. Waxay shaqada dib ugu soo laaban doonaan bisha Maarso ee sanadka 2018. Kulanka maanta ayaa furmay 12-kii duhurnimo, wuxuuna dib uga dhacay xilliyadii uu furmi jiray oo ahaa 10-ka barqannimo. Ajendaha kulanka maanta wuxuu ahaa; soo bandhigidda Warbixinta Guddiga Dastuurka ee baarlamaanka…
December 15, 2017 January 4, 2018 Kalfadhi
Dastuur waa heshiiska ugu sarreeya ee xaddida haykallada aasaasiga ah ee ay dowladi leedahay iyo nidaamka xukunka ee xeerka u ah shacab ama bulsho nidaam wadaagta, boqortooyo iyo jamhuuri midkii ay ku dhaqmaanba. Waxaa kale oo uu dastuurku xaddidaa sawirka xukuumadda sida jamhuuriyad Barlamaani ah ama mid Raysulwasaare leh. Dastuurku waa kan qof kasta xaqiisa u damaanad qaada. Maamulku wuxuu ka kooban yahay sharci-dejinta oo ah baarlamaanka iyo fulinta oo ah golaha wasiirrada ama madaxweynaha ama boqorka iyo xeer-ilaalinta. Saddexdaba waxaa maamula dastuurka. Dastuurkii u degsanaa dalka wuxuu ka mid…
December 14, 2017 December 14, 2017 Kalfadhi
Khilaaf la xiriira loollan dhinaca sharciga ah ayaa soo kala dhexgalay guddoonka Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya. Wuxuu salka ku haaya shir uu qaban-qaabinayo guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) oo la filaayo inuu dhowaan ka dhaco magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Shirkaas waxaa lagu casuumay guddoomiyeyaasha baarlamaannada maamul-goboleedyada dalka. Warbaahinta oo ka warhaysay abaabulka shirkaas ayaa heshay warqad cabasho ah oo uu soo saaray Guddoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, taas oo guddoomiyeyaasha baarlamaannada maamul-goboleedyada looga digayay ka qeybgalka shirka. Warqadda oo uu mudane Cabdi…